FAA'IIDADA YOGA | HALKA LAGU TALO YOGA. - THE INDIAN FACE
Waxaan muhiimad dheeraad ah siineynaa caafimaadkeena jireed iyo maskaxeed, waana sababtaas awgeed ku dhaqanka yoga ayaa si aad ah u koray sanadihii la soo dhaafay. Mashruucan, waxaan soo jeedinay in aan wax yar ka yareysano mowduuca isla markaana aan xallino qaar ka mid ah shakiga ka dhalan kara haddii aad ka fekereyso ku dhaqanka yoga, si aad u diyaar garowdo oo aadan waxba u seegin markay noqoto inaad noqoto yogi run ah . Laakiin waxyaabaha ugu horeeya ee ugu horeeya ...
Waa maxay yoga?
Ereyga "yoga" wuxuu ka yimid asalka Yuj, oo macnaheedu yahay "midaynta, isku xirnaanta, la xiriirida." Ku-tababbarka yoga wuxuu naga caawinayaa saddex heer: jir ahaan, maskax ahaan iyo ruux ahaanba. Shaki la'aan, yoga waa xaalad ay dhaqdhaqaaq maskaxeed iyo mid shucuur leh ay dejiso oo ay u oggolaato inay la kulmaan midowga kuwa ugu sarreeya.
In kasta oo ay tahay waxqabad aad u caan ah, haddana waa run faa iidooyinka yoga Waxay yihiin kuwo la taaban karo oo dhab ah, maadaama mahadcelinta neefsashada dheer iyo qoto dheer ee hogaamineysa hawshan, waxaan yareyn karnaa cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha, nasasho, baran karnaa inaan xoogga saaro oo aan si fiican u shaqeyno, waxaana jira xitaa kuwa jimicsiga yoga si ay u gaaraan hurdo qoto dheer .
Maxay yihiin faa'iidooyinka jimicsiga yoga?
Faa’iidooyinka yoga waxaa lagu ogaadaa caafimaadka jirkeena iyo maskaxdeena. Anaga oo ku dhaqmayna anshaxdan waxaan horumarin doonnaa muuqaalkeena, dheef-shiidkeenu wuxuu noqon doonaa mid culus, fikirradeenuna waa ka sii caafimaad badan yihiin, waxaan kordhin doonnaa awooddeena inaan xoogga saarno waxaanan heli doonnaa dabacsanaan.
FAA'IIDADA YOGA EE JIDHKA:
Niyad qabashada: Neefsashadu waa shay muhiim u ah yoga. Neefsashada wanaagsan waxay hagaajineysaa niyaddeena maalin kasta, waxaan yareyn karnaa cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha, muruqyadeenna waa nastaan ​​waxaanan yareyn doonnaa u nuglaanta kacsanaanta jirka.
Dabacsanaan badan: dabacsanaanta waxay caawisaa yareynta xiisad muruq ah oo ka dhalata xaalada kacsan ee jirkeenu mararka qaar galayo culeyska fekerka iyo inuu dabciyo muruqyada xad dhaafka ah ee keena dhaqdhaqaaqa maalinlaha ah ee jirkeena.
Jidhka caafimaadka qaba: yoga waxay kaa caawineysaa yareynta iyo ka hortagga lumbar ama xanuun ku dhaca makaanka afkiisa oo ay keento muuqaal xumo iyo dhaq dhaqaaq la’aan.
Muruqyo adag iyo lafo: yoga waxay ka hortagtaa lafaha luminta, waxay kordhisaa dabacsanaanta wadajirka waxayna naga saacideysaa inaan yeelano jirkeena midab badan.
Waxay xoojisaa nidaamka difaaca jirka: Markaan dabcino heerarka cortisol ("hormoonka walbahaarka") ayaa yaraanaya. Heerka hoose ee cortisol macnaheedu waa iska caabin badan oo ku saabsan cudurrada qaarkood iyo dhiig kar caafimaad qaba.
Calorie gubanaya: Yoga wuxuu diiradda saarayaa shaqada muruqyada, in kasta oo uusan ahayn cayaar xoog leh. Muruqyada waa la shaqeeyaa kharashka kalooriguna wuu kordhaa
FAA'IIDOOYINKA YOGA EE MAANKA:
Hurdo qoto dheer: Iyadoo loo marayo yoga iyo farsamooyinka nasashada ee ay na siiso, waxaan heli doonnaa waqti sahlan oo aan ku seexanno tayo leh.
Is-xakameyn ka weyn: Ku tababbarashada yoga waxay kaa caawin doontaa inaad ku korto jir ahaan iyo maskax ahaanba. Si aad si fiican u ogaato naftaada oo aad u ogaato waxa jidhkaaga iyo maskaxdaadu u baahan yihiin inay fiicnaadaan.
Walaac iyo walbahaar yar: Inaad ka bilawdo maalintaada inaad ka warqabto xilligan xaadirka ah naftaadana u hurto, halkii aad ka badin lahayd naftaada dhamaan howlahaaga iyo waajibaadkaaga ayaa kaa hor istaagi doona inaad murugooto waqtiga ka hor.
Tamar wanaagsan iyo niyadda wanaagsan: Ku tababbarashada yoga waxay kaa dhigeysaa inaad maalintaada ka aragto dhinac kale.
Halkeen ku tababbaran karaa yoga?
KU DHAQAN YOGA GUDAHA
U wareeji fadhiyadaada yoga meel banaan waxaadna ogaan doontaa sida ay u kordhiso caafimaadkaaga jireed iyo shucuureed.
Xeebta: Haddii aad ku nooshahay xeebta agteeda, labisto, sariirtaada qabso, dareenkaaguna ha ahaado hirarka, neecowda badda iyo xiriirka jidhkaaga iyo maskaxdaada. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad sida ugu badan uga faa’iideysato khibradaada.
Sare u qaad buur: Ku dhammee maalin socosho ama socod lug ah iyada oo kal-fadhiga yoga loo qaadanayo jihada tixraaca, iyo dareenka xorriyadda ee dhererku bixinayo, dhageysiga oo keliya codka dabaysha ee ku xigta neefsashadaada, waxay noqon kartaa mid ku habboon in la nasto, dib loo buuxiyo xoog leh oo ku raaxee maalin isboorti xitaa intaa ka sii badan.
Beerta dhexdeeda: Haddii aad ku nooshahay magaalada oo ay kugu adag tahay inaad naftaada ku hareereysid dabeecadda, beeraha nasashada waxaad fursad weyn u leedahay inaad naftaada dhex gasho barashada yoga dibadda, keligaa ama saaxiibbadaa.
Goobtaada ciida: Xitaa haddii aad ka maqantahay guriga oo aad dalxiis sameyso, ha ilaawin inaad dhigato waxaaga derin Shandadaada, weligaa ma ogaan doontid meesha aad fursad uga heli doontid inaad jimicsigaaga yoga ku dhaqan geliso.
KU DHAQAN YOGA EE SPAIN
Meelahan cajiibka ah ee lagu tababarto yoga gudaha Isbaanishka waxay leeyihiin fikrad isku mid ah: in lagu hareereeyo dabeecadda. Miyaad hore u taqaanay iyaga?
Guriga Cuadrau: Gurigan bey'adda ee ku yaal Beerta Qaranka Ordesa y Monte Perdido wuxuu abaabulaa dib u gurasho Yoga, Farshaxan iyo Dabeecadeed. Casa Cuadrau waxay bixisaa hoy, casharo yoga inta ay qoraxdu ka dhacayso qolka iyo menu vegan oo ay ku jiraan cuntada deegaanka iyo kuwa dabiiciga ah.
Dhiirrigeliso yoga: Jasiiradaha Balearic waa goob ay u badan yihiin dib u gurasho sababo la xiriira xeebta badda iyo dabeecadda gudaha. Inspira Yoga waxay ku abaabushaa Menorca iyo Ibiza. Laura Ruiz, oo ka mid ah labada aasaasayaasha xaruntan, ayaa leh "Waxaa jira geeso xasilloon oo qurux badan, marinno qarsoon, buuro dhaadheer oo daldala, safarro loo soo maro gudaha iyo xeebta, waddooyinka loo maro baaskiilka iyo socodka ...". Dib-u-gurashooyinkoodu waxay ka kooban yihiin dalxiisyo yoga iyo muusigga ah si ay uga fikiraan qorrax dhaca ama u arkaan qorrax ka soo baxa badda, yoga iyo quraacda xeebta.
MasQui: Fikradani waxay ku saleysan tahay dayactir lagu sameeyay qarnigii XNUMX-aad dhul beereed lagu rakibay hudheel qurxoon oo ku yaal bartamaha Sierra de Mariola Natural Park, oo u dhexeeya Alicante iyo Valencia. Meel aad dib uga buuxiso baterigaaga oo aad ugula xirirto dabeecadda. Kooxdu waxay leedahay dalabyo badan oo kaladuwan oo ku saabsan barnaamijyada la xiriira yoga, daryeelka shaqsiyeed, daaweynta culeyska fekerka, nasashada u janjeedha iyo edbinta nasashada… Laakiin barnaamijka xiddiggu waa yoga iyo fikirka Intaas waxaa sii dheer, koorsooyinka waxaa lagu bixiyaa daaweynta tamarta, ama cuntada dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Dib u gurashada Shama: Waa goob loogu talagalay in lagu xiro deganaansho iyo ladnaan iyada oo loo marayo yoga iyo fikradaha dib u gurashada. Kooxdu waxay xarumo ku leedahay Lanzarote, Beerta Dabiiciga ah ee Grazalema, xeebta Bolonia iyo Sierra de Gredos. Marka waxaad dooran kartaa midka aad ugu jeceshahay ee adiga kugu habboon.
Guriga Aamusnaanta: Waxay ku taalaa Sierra de Gredos, laba saacna waxay u jirtaa Madrid. Hareeraha raaxada leh, keymaha dhirta leh iyo aamusnaanta ayaa kugu martiqaadaya inaad xasilloon tahay oo xasilloon tahay. Marka lagu daro fasallada yoga, fikirka iyo aqoon isweydaarsiyo kala duwan, waxay abaabulaan nashaadaadyo badan oo dibedda ah.
QAAR KA MID AH Goobaha FADLAN HALKA LAGU DHAQAN YOGA
Waxay ku taal bartamaha Andes ee koonfurta Bolivia. Waa macdanta cusbada ugu weyn adduunka. Gelitaanka gurigan milixdu waxay lamid tahay socodka meel dhexe. Mararka qaarkood dhul cirro leh oo aan dhammaad lahayn, marna daruuro. Halka ay xad-dhaafnimadu u bannaynayso meel cidlo ah iyo aamusnaan buuxda. Waxaas oo dhami waxay ka dhigayaan meel ku habboon in boorsada la dhigo, sariirta laga soo saaro oo la galiyo booska lootoska meel qarsoodi ah, horteeda muuqaal u muuqda mid aan dhammaad lahayn.
Grand Canyon waxaa loo fahmay inay tahay mid ka mid ah goobaha ugu macquulsan adduunka, Grand Canyon waxay bixisaa maylal dhul oomane ah, boholo iyo wadiiqooyin lagu maydho falaadhaha qorraxda oo umuuqda kuwa ka ruuxi ah meel kasta oo kale. Ku tababbarida yoga meeshan ayaa ku siin doonta, waqti uun, halka laga yaabo inaad neefsato, joogitaanka gorgor oo cirka maraya, sidaas awgeedna ku soo celinaya dhawaqyada waqti kale ee ku lifaaqan dhagxaanta qorraxda.
Saqafka sare ee New York (USA)
Sidoo kale waad qaadan kartaa doorka Carrie Bradshaw ee "Jinsi iyo Magaalada" waxaadna aadi kartaa fasal yoga ah oo ka mid ah saqafyada sare ee caanka ah ee New York, fiidkii, iyadoo magaalada cagahaaga ay ku taal, halkaasoo laydhadhka, mashquulka iyo xawaaraha magaaladan weyn ayaa ka baxsan meel aad gaari karto.
Qalabkee ayaan u baahanahay inaan ku jimicsado yoga?
Marka lagu daro a derin yoga, dhar raaxo leh, biyo dhalo ah iyo shukumaan, waxaan soo qaadaneynaa qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan karto markaad ku tababaraneyso yoga:
Gogosha yoga: Waa muhiim inaad doorato gogosha yoga oo raaxo leh oo ku habboon baahiyahaaga. Kuwani way ku kala duwan yihiin iyadoo ku saleysan dhumucda, dusha, culeyska, ama maaddada. Mat Lidl Yoga Mat ama Yogi Bare Mat waxaa lagu sameeyaa agab bey'adeed u habboon. Haddii aad tahay qof bilow ah oo aadan u baahnayn derin aad u khaas ah xilligan, waxaad had iyo jeer ka heli kartaa gogoshaada yoga Decathlon.
Zafu ama barkinta fekerka: Waa barkimo sare oo adag oo kuu oggolaanaysa inaad dhabarkaaga toosnaato oo toosnaato oo aad nasato miskahaaga.
Xirmooyinka Yoga: Asal ahaan baloogyadu waxay ka sameysnaayeen alwaax, laakiin hadda sidoo kale waxay ka samaysan yihiin fiiq ama xumbo. Aad ayey waxtar u leeyihiin inay soo bandhigaan muuqaalka cusub oo ay dareemaan raaxo inta ay ku guda jiraan howshaada.
Suunka yoga: Waa qalab siyaado ah oo wax weyn ka tari kara dadka dabacsanaanta yar, laakiin sidoo kale kuwa doonaya inay kaamil ahaadaan farsamadooda. Xirashada suunka micnaheedu maaha dabacsanaanta liidata.
Sideen yoga ugu tababaran karaa guriga?
Mid ka mid ah dhiirigelinta ka dhigtay dhaqankan inuu noqdo mid guuleysta, haddii ay suurtagal tahay, ayaa ah inta lagu gudajiro karantiilidda ay sababtay COVID-19 faafa, fasallada yoga ee guriga laga helo waxay ahaayeen isbeddello. Waxaan ku soo bandhigi karnaa laba xirfadlayaal ah oo qaybta ah kuwaas oo naftooda u sameeyay adduunyada dhijitaalka ah iyaga oo la wadaagaya howlahooda yoga iyo barashada fasallada yoga khadka tooska ah. Midkood waa Xuan Lan, oo ah macallin yoga ah iyo khabiir fayoobaanta. Marka lagu daro bixinta fasalo iyo casharro waji-ka-waji ah, fasalladeeda yoga waxaa sidoo kale lagala soo xiriiri karaa khadka tooska ah ee loo yaqaan 'YouTube channel' (Xuan Lan Yoga), oo macallinka uu ku leeyahay in ka badan 300 oo fiidyow. Haddii aad sidoo kale rabto inaad nuugto heesaha yoga ee Xuan Lan u isticmaalo fasalladiisa, waxaad ka heli kartaa Spotify (Xuan Lan Yoga). Macallinka ayaa sidoo kale leh bog ay si joogto ah ugu soo gudbiso macluumaad ku saabsan adduunka yoga, xiisaha ku saabsan dhaqankan, waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ku dhaqanka yoga iyo wareysiyo lala yeelanayo xirfadlayaasha caafimaadka ee ku saabsan faa'iidooyinka yoga ee maskaxda iyo jidhka.
Ujeedo kale oo ku saabsan dhaqankan ayaa sidoo kale ah macalinka Vinyasa Yoga, Elena Malova, oo ah tababare shaqsi ah, oo ay weheliso lamaanaheeda Marcelo, ay ku barayeen fasalada yoga khadka tooska ah ilaa iyo sanadkii 2011 iyagoo u soo gelinaya barnaamijyada yoga, casharro, kanaalka YouTube-ka Elena Malova yoga. ebook iyo wadaagida muusikada yoga. Hadaad ku dhiiratid inaad waxbadan ka ogaatid macalinkaan, qeybta Podcast-ka "Raadi kartidaada" Elena Malova waxay kahadleysaa sirta si aad naftaada ugu fiicnaato sidoo kale xiisahaaga ayey kuu noqon kartaa. Ka raadi YouTube!
Dhinaceeda, isbeddelka 2020 wuxuu ahaa ku dhaqanka yoga sida lamaanaha guriga si sax ah. Gaar ahaan inta lagu gudajiro karantiilka sanadka 2020, qoysasku waxay boorka ka jafteen gogosha caadiga ah ee loo yaqaan 'Decathlon yoga' isla markiiba ka dib, shabakadaha bulshada waxaa ka buuxay fiidiyowyo qoysaska ama asxaabta ku tababaranaya yoga lammaane ahaan. Marka lagu daro firfircoonida firfircoon ee waqtiga naga dhigtay guriga culeys yar, ku celcelinta yoga sida lamaanaha waxay aad ugu fiicnaan kartaa hagaajinta xiriirka dadka kale. Waxay kaa caawineysaa inaad dulqaad badan yeelato, inaad kordhiso kalsoonida iyo kalsoonida kan kale iyo inaad xoojiso isku xirnaanta aad abuureen.
Waa maxay muusikada saxda ah ee lagu tababarto yoga?
Dhiniciisa, macallinka yoga ee 'Rocket', wuxuu hubiyaa in laxanka uu ku xirnaado neefsashada. Qaacidadiisa ku saabsan doorashada saxda ah ee muusigga yoga way cadahay: “Waxaan ku xiraa dhaqdhaqaaqa iyo neefta muusig gaar ah oo isku dhafan, qadar celiya neefsashada oo ka hooseysa 10 daqiiqadii, laakiin si tartiib tartiib ah ugama muuqaneyso in yogigu culeys dareemo ama baxo neefta: 69 garaac daqiiqadiiba waa laxanka saxda ah - iskudarsankayga oo dhan dib ugu noqo taas. Professor-ku wuxuu kula talinayaa fanaaniinta sida Petit Biscuit, Jon Hopkins, Nils Frahm, iyo James Blake.
Marka, haddii sheygaagu yahay inaad dhageysato muusikada yoga markaad ku tababaraneyso edbintan, waad raaci kartaa talooyinka Rocket, halkan waxaa ku yaal liistooyin kale oo aad ka heli karto Spotify oo laga yaabee inay kaa caawin doonaan inaad ka fikirto oo aad hagaajiso farsamadaada yoga:
Xuan Lan Yoga: Muusigga fayo-qabka
Yoga iyo Ciyaaraha xiisaha leh!
Yoga sidoo kale lagama dareemo xirfadleyda isboortiga, kuwaas oo ku soo daray edbintan diyaarintooda, tababbarkooda iyo fekerkooda joogtada ah. Ciyaartoyda caanka ah ee ku raaxeysanaya dhaqankan, waxaan kaheleynaa hogaamiyaasha adduunka sida Kelly Slater ee adduunka dabaasha, kuwaas oo ku andacoonaya in, isaga, yoga uu u adeegay hab lagu soo jiito dhiirigelinta iyo u fiirsashada jirkiisa iyo maskaxdiisa markii aad leedahay u baahday. Intaa waxaa dheer, Surfer-ku wuxuu ku yimid gabagabada taas, dhammaan faa'iidooyinka yoga, wuxuu ku dhegan yahay waxa edbintani barayso ee ku saabsan filashooyinka iyo maskaxda: waxay ka caawisaa inuu yeesho maskax furan.
Muuqaal kale oo duufaan ah oo aan lumin fursad uu si buuxda ugu lug yeesho adduunka yoga waa Gerry López, oo ku dhowaad 70 sano loo arkaa run yogi oo qaado kanaga derin meel kasta oo lagu tababaro, lagu fekero oo lagu abaabulo dib u gurasho Bali ah si loo baro loona faafiyo nabadda iyo xasilloonida uu ku guuleystay. Intaas waxaa sii dheer, dhanka barafka Barafka ee Corviglia, Switzerland, waxaad ku raaxeysan kartaa barafka iyo yoga si isku mid ah. Macallinka Ski ee Sabrina Nussbaum waxay abuurtay fikradda ah "Yoga on barafka" oo ah hab si miyir qab ah loogu raaxeysto barafka. Ujeedada fikradani waa in la nasto oo lagala soo derso soo dhaadhaca aragti kale. Goobaha lagu nasto ee barafka badan waxaa ka mid ah koorsooyin ku baraya edbintaan waxyaabaha ay bixiyaan.
Hadda oo aad ogtahay faa'iidooyinka yoga, meelaha ugu fiican ee lagu dhaqmo, qalabka yoga iyo muusikada aad ugu baahan tahay fasalladaada, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ogaatid weedho yoga ka mid ah oo kaa caawin doona dhiirrigelin iyo dhiirrigelin markaad gasho fasalladaada ugu horreeya. ee yoga.
"Yoga waa cayaaraha ugu guusha badan ee caalamiyeynta" - Stefanie Syman, oo ah qoraa ka tirsan The Subtle Body: The Story of Yoga in America.
"Neefsashadu waa boqoradda maskaxda" - BKS Iyengar.
"Labada waxyaalood ee ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad sameyso yoga waa jirkaaga iyo maskaxdaada" - Rodney Yee.
"Yoga maaha mid ku saabsan is-hagaajin, laakiin waa mid ku saabsan is-aqbalaad" - Gurmukh Kaur Khalsa.
Waxaa laga yaabaa inaan kaa dhaadhicinay in marka xigta ee aad u dhowaanaysid dhaqankaaga yoga, sidaa yeel adigoo si buuxda uga warqaba caafimaadka maskaxda kadib. Haddii aad sidoo kale ku sameyn kartid buurta dusheeda Pyrenees, ama badda hore ee Jasiiradaha Balearic, aad ayey ugafiican tahay! Kalsoonow naftaada kuna noolow khibrada isku xirnaanta jirka, maskaxda iyo ruuxa oo kaliya yoga ay ku siin karto.
Diyaar ma u tahay xilliga barafka? Freeriding ayaa dalbanaya, shaki kuma jiro taas! Labadaba marxaladda koritaanka iyo soo degitaanka, fuushanuhu waa inuu lahaadaa taxane ah xaalado jireed oo wanaagsan